Nepal Mamila | कांग्रेस महाधिवेशनः कुन प्रदेशमा कस्को छ चर्चा ? - Nepal Mamila कांग्रेस महाधिवेशनः कुन प्रदेशमा कस्को छ चर्चा ? - Nepal Mamila
कांग्रेस महाधिवेशनः कुन प्रदेशमा कस्को छ चर्चा ?
काठमाडौं- देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसले नितान्त नयाँ संगठन यसपटक देखि बनाउँदै छ। कांग्रेसको पार्टी संरचनामा प्रदेश समिति नयाँ हो। पार्टी संरचनामा थपिएको प्रदेश कार्यसमितिको मूल नेतृत्वमा पुग्न पार्टी भित्रका समूहले तयारी गरिरहेका छन्।
आसन्न १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार भदौ १ र २ मा प्रदेश अधिवेशन हुनेछ।
प्रदेश १ मा संस्थापनपक्षले अमृत अर्याललाई प्रदेश सभापतिमा उठाउन खोजेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई प्रदेश सभापति बनाउन संस्थापनपक्षले खोजेको थियो। उनले जनजातिबाट केन्द्रमा सहमहामन्त्री घोषणा गरिसकेकाले प्रदेश १ मा देउवापक्षको सभापतिमा मोरङका अमृत अर्याललाई उठाउने तयारी गरिएको छ। उनी मनोनित केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। केन्द्रीय सदस्यमा पराजित उनलाई देउवाले मनोनयन गरेका थिए।
झापा, मोरङ र सुनसरीका महाधिवेशन प्रतिनिधि धेरै हुने गर्दछन्। त्यसै स्थानबाट प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने नैतिक दबाब दुबै समूहलाई छ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश २ को पार्टी संरचना निर्माणमा हाबी हुँदै आएका छन्। निधिले नै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएपछि संस्थापनपक्ष दुई चिरा परेको छ। प्रदेश २ मा निधिले सभापतिका लागि धनुषाका रामसरोज यादवलाई अघि सार्न लागेका छन्। संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीसमेत छन्।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्ष प्रदेश २ मा देउवा र निधिको तयारीका आधारमा आफ्नो उम्मेदवार बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवलाई प्रदेश सभापति बनाउने संस्थापनइतरको इच्छा थियो। उनले केन्द्रमा सहमहामन्त्रीमा लड्ने मनस्थिति बनाएका छन्। उक्त समूहबाट पर्सा जिल्ला सभापति अजय द्विवेदीलाई अघि सार्ने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ।
पूर्व मन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत प्रदेश सभापति बन्ने लाइनमा छन्। सिन्धुपाल्चोकका नेता बस्नेत संस्थापनसमूहबाट बलियो प्रत्यासी हुन्।
बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले संस्थापनपक्षबाट प्रदेश सभापतिमा दाबी गरेका छन्। मकवानपुर कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका बानियाँ सभापति देउवाका निकट व्यक्ति हुन्।
देउवालाई समय समयमा साथ दिँदै आएका केन्द्रीय सदस्य भीमसेनदास प्रधान पनि प्रदेश सभापतिका आकांक्षी हुन्। सिटौला समूहमा रहेपनि प्रधान संस्थापनपक्षसँग कार्यगत एकता गर्दै आएका छन्। संसदीय दलको नेता चुन्ने क्रममा उनले देउवालाई मत दिएका थिए। संस्थापनपक्षको समर्थन लिएर प्रधान उठ्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट बागमती प्रदेश सभापति बन्ने आकांक्षी धेरै छन्। काभ्रे सभापति मधु आचार्य, नुवाकोट सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी, धादिङ सभापति रमेश धमला, धादिङकै नेता रामनाथ अधिकारी सभापतिको आकांक्षी हुन्। आफ्नै समूहका नेता चयन गरी एक जना उम्मेदवार बनाउन पौडेल पक्षलाई चुनौती छ।
केन्द्रीय दुई नेतामध्ये एकलाई प्रदेश सभापतिमा उठाउने संस्थापनपक्षको तयारी छ। केन्द्रीय सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र गोविन्द भट्टराईको गण्डकी प्रदेश सभापतिमा चर्चा छ। गोरखाका पाण्डे र तनहुँका भट्टराईमध्ये एक जना सभापति देउवापक्षबाट गण्डकी प्रदेश सभापतिको प्रत्यासी बन्ने सम्भावना छ।
संस्थापनइतरले कास्कीका ‘सिनियर’ नेता शुक्रराज शर्मा र तनहुँका नेता रघु पौडेलमध्ये एकजनालाई उठाउने सम्भावना रहेको छ। पौडेल गत निर्वाचनमा तनहुँको १ (ख) मा पराजित भएका थिए।
लुम्बिनीमा संस्थापनइतरले प्रदेश सभापतिको नाम करिब टुंगाएको छ। केही दिन अघि बुटबलमा भेला भएर संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरुले रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनको नाममा सहमति गरेका छन्। संस्थापनपक्षबाट नवलपरासीका केन्द्रीय नेता देबेन्द्रराज कँडेल लुम्बिनी प्रदेश सभापति उठ्ने चर्चा छ।
कर्णालीमा वरिष्ठ नेता पौडेलपक्षले सुर्खेतका केन्द्रीय नेता ह्यदयराम थानीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभापतिमा पौडेल पक्षका तरुण दलका नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले पनि दाबी गरेका छन्।
देउवापक्षबाट कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नाम चर्चामा छ। शाही पिछडिएको क्षेत्रबाट केन्द्रमा सहमहामन्त्रीको दाबी गर्ने पक्षमा छन्। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको तजविज कर्णालीमा चल्ने भएकाले उनले निश्चित गरेकै व्यक्ति संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवार बन्ने प्रवल सम्भावना छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन पक्ष बलियो छ। संस्थापनइतरलाई प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार खोज्न कठिनाई हुने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिममा नेताद्वय रमेश लेखक र एनपी साउदको निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ। कैलालीका जिल्ला सभापति नरनारायण शाह (मनु) प्रदेश सभापतिका आकांक्षी हुन्। देउवापक्षबाट उनी प्रत्यासी बन्ने लाइनमा छन्। डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल संस्थापनइतरबाट प्रदेश सभापतिमा उठ्ने सम्भावना छ। तुलनात्मक रुपमा उक्त प्रदेशमा संस्थापन इतर कमजोर रहेकाले उनी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी नदिएर केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने चर्चा पनि छ।
नरनारायण शाहलाई संस्थापनपक्षले प्रदेश सभापतिमा उठाएन भने पौडेल समूहले उनलाई तान्न खोजेको छ।संस्थापनइतरमा उनलाई ल्याउन सकिए आफ्नो समूहलाई सुदूरपश्चिममा बल मिल्ने उक्त पक्षको ठम्याईं छ।